Sida loo: Warbixinta Xaaladda Nolosha ee Hadda - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Sida loo: Warbixinta Xaaladda Nolosha ee Hadda
Sida loo: Warbixinta Xaaladda Nolosha ee Hadda
Haddii aad gelinayso xog ku saabsan mashruuca Wacyigelinta Waddada ama mashaariic kale oo adeeg, waxaad sidoo kale ku duubi lahayd xiriir kasta oo aad la samayso macaamiisha qayb yar oo la yiraahdo Xaaladda Nolosha Hadda.
Marka la ururiyo dhammaan xogtan, sidee iyo xaggee baad ka heli kartaa?
Waqtigan xaadirka ah, ma jiraan wax warbixinno ah oo ku jira HMIS oo si gaar ah loogu dhisay Xaaladda Nolosha Hadda, laakiin waxaa jira hawlgal degdeg ah iyadoo la adeegsanayo Warbixinta Faahfaahinta Barnaamijka, oo laga helay Warbixinnada Barnaamijka Ku saleysan.
Si aad u maamusho Warbixinta Faahfaahinta Barnaamijka kaliya ee Xaaladda Nololeed ee hadda jirta, raac tallaabooyinkan:
1. U gudub Warbixinnada -> Warbixinnada Barnaamijka Ku -saleysan -> [GNRL -220] Warbixinta Faahfaahinta Barnaamijka.
2. Guji Run.
3. Dooro nooca (yada) Mashruuca, Xaaladda Barnaamijka, iyo Barnaamijyada. Haddii aad u baahan tahay inaad dooratid wax ka badan hal shay oo ku jira liiska, hoos u riix furaha Shift inta aad gujinayso waxyaabaha la rabo.
4. Noocyada (shaashadaha) shaashadda, dooro “Xaaladda Nolosha Hadda.”
Ma xiisaynaysaa barashada talooyin badan oo Excel ah? La soco maqaallo kale oo ku saabsan Blog -ga HMIS.
Ma rabtaa inaad iska qort